ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्लान् ?
हाल प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ सांसद रहेका छन् । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नको निम्ति ओलीलाई १३६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जुन प्राप्त गर्नको निम्ति ओलीलाई जसपाको सहयोग बिना असम्भवप्रायः रहेको छ ।
बुधवार, जेठ ५, २०७८ विमल थापा
पार्टीभित्र विद्यमान आन्तरिक किचलोबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति संसदबाट विश्वासको मत लिनु अपरिहार्य भएको थियो । विश्वास मत लिनका लागि ओलीले बैशाख २७ गतेका लागि डाकेको प्रनिनिधि सभाको बैठकमा उनले विश्वासको मत गुमाउन पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको बहुमतको समर्थन कायम छ भनी पुष्टी गर्न गरिएको मतदानमा उनका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेको थियो । बैठकमा २३२ जना सांसद उपस्थित भएतापनि उनकै पार्टी नेकपा एमालेका २८ जना सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएर ओलीलाई सोझै असहयोग मात्र गरेनन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न हौसिने मार्ग प्रसस्त पनि गरिदिए ।
संसदमा विश्वासका मत गुमाएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओली एकाएक कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा परिणत भए । तत्पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीका विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी सहितका दलले संविधान बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न आव्हान गर्न भनेपछि राष्ट्रपतिले बैशाख ३० गते राती ९ बजेसम्मको समयसिमा निर्धारण गरेर नयाँ सरकार गठनका निम्ति आव्हान गरिन् ।
यो समयसिमामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्न नेकपा माओवादी केन्द्र अनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले राम्रै पापड बेले । तर यो बीचमा जसपा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतोले आफूहरु नयाँ सरकारको कसरतमा नलाग्ने उद्घोष गरेसँगै देउवा पक्षधर नेपाल पक्षको मनस्थिति कस्तो रहला ? भन्नेमा अन्यौलता साँधेर बस्न बाध्य भयो । त्यसो त ओली पनि के कम थिए र ? उनले पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई सहमतिमा ल्याउने कोसिस भने गर्न भ्याएकै हुन् । तर कांग्रेस ओलीप्रति सकारात्मक नभएपछि आफैबाट चिडिएका माधवकुमार नेपालसँग ओली पुनः सम्वादमा जोडिए । गर वा मर को अवस्थामा पुगेका ओली–नेपालबीचको पटक–पटकको संवादले भने बैशाख ३० गते अपरान्ह मात्रै एउटा लय समाउने संकेत देखायो । यसअघि माधवकुमार नेपाल पक्ष सांसदहरुले राजिनामा दिने मनस्थिति सार्वजनिक भएपश्चात कांग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको निम्ति हौसिएको थियो । त्यसो त जनता समाजवादी पार्टीमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने बरु आवश्यक परेमा ओलीलाई नै सघाउने मनस्थितिमा पुगेपछि देउवा गठबन्धन ओली–नेपालबीचको संवादको परिणाम कुर्नुको कुनै विकल्प थिएन । जब ओली–नेपालबीचको सम्वादबाट एमाले सांसदहरुले तत्काल राजिनामा नदिने सहमति बुँदा सार्वजनिक भयो, तब भने माओवादीको बुइँ चढेर फेरि पनि सत्तामा पुग्न आतुर देउवालाई पुनः ठूलो झड्का लाग्यो । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका निम्ति दिएको समय सिमा घर्किदै गर्दा बैशाख ३० गते साँझतिर भने कांग्रेस सभापतिले बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना लगभग समाप्त भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । त्यतिखेर उनीहरुलाई माधव नेपालले आफूलाई धोका दिएको र उनको यतिबिध्न विश्वास गर्न नहुने आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति समेत सार्वजनिक भएको थियो ।
बैशाख ३० गते राती ९ बजेसम्मको निर्धारित समयलाई कुरेर बसेको शितल निवासले समय सकिनुपूर्व नै बहुमतको सरकार गठन नुहने आंकलन भने गरिसकेको थियो । यद्यपि, समय सकिएको केहीबेरमा नै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत ठूलो दलका हैसियतका केपी शर्मा ओलीलाई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । बहुमत प्राप्त सरकारबाट विश्वास गुमाएर पनि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधामन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनको लागि यो त्यति सहज बन्न सकिरहेको छैन । संसदबाट जतिसक्दो छिटोे विश्वासको मत लिने दाउमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक पहल गर्न थालेका छन् । उनका निम्ति अहिले दुईवटा चुनौती विद्यमान रहेको छ । पहिला त आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनु र अर्काे भनेको जनता समाजवादी पार्टीको साथ लिनु । यो दुवै उनको निम्ति त्यति सहज देखिँदैन ।
आफूले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नको निम्ति गठन गरिएको कार्यदल समस्या समाधानको बाटोमा लागेतापनि नेपाल पक्ष भने अझैपनि पूर्ण रुपमा आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि संसदबाट विश्वासको मत लिने अनुकूल वातारण कुरिरहेका छन् । उनका निम्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर मात्र पुग्ने अवस्था पक्कै पनि छैन । जबसम्म जसपाको विश्वास उनले पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तबसम्म संसदबाट विश्वासको मत पाउन उनको निमित कठिन नै देखिन्छ ।
बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नगर्नुको मुख्य कारण भनेको आफ्नै सांसद बैठकमा अनुपस्थित हुनु र जसपाका १५ जना सांसद तटस्थ बस्नु नै थियो । तर जसपाका १५ जना सांसद तटस्थ बस्दा संसदमा विश्वास गुमाएपनि ओलीका निम्ति भने अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग हुन पुग्यो । उनीहरु यसरी बस्दा अर्काे सरकार गठनमा पनि जटिलता थपियो । फलतः अल्पमतकै भएपनि ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।
हाल प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ सांसद रहेका छन् । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नको निम्ति ओलीलाई १३६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जुन प्राप्त गर्नको निम्ति ओलीलाई जसपाको सहयोग बिना असम्भवप्रायः रहेको छ । तर जसपा भित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षको साथ लिएर अगाडि जान खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मगंलबार महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले नराम्ररी झस्काएको छ । उनीहरुले संयुक्त रुपमा वक्तत्व जारी गरी आफूले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहेका कारण पनि ओलीको मनका चिसो पस्नु स्वभाविक नै हो ।
राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा नै हुँदैन । परिस्थिति र अवस्थितिमा फेरबदल आयो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसपछि भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को बाटो खुल्ला हुन्छ ।
एकल बहुमत, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत र ठूलो दलको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसके वा त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि पनि नेपालको राजनीति केपी ओलीकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै चतुर मानिने ओलीले आफूले लिएको पूर्ववत निर्णय ‘अर्लि इलेक्सन’ को बाटोमा फेरिपनि मुलुक नजाला भन्न सकिन्न । यदि यसो भयो भने त्यसको नेतृत्व उनी आफैले गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन थालेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, जेठ ५, २०७८, ०२:५६:१९
आलोचना, राजनीति र समृद्धिमा युवा नेतृत्व
मुलुक संसद विगठनको दिशातर्फ !
फुटको संघारमा नेकपा एमाले !
महिनावारी एक मिठो अनुभूति
मानब बेचबिखन समाजको गम्भीर चुनौती
बुधवार, भदौ २४, २०७७ क्यापिटल दैनिक
सपना साकार पार्न तल्लिन एक अब्बल युवाको अन्त्य "अस्ताएका शुुसान्त"
शनिवार, असार ६, २०७७ क्यापिटल दैनिक